Creative Writing » အလိမ်ခံရတဲ့နေ့	13
kai says: တို့ဆေးဆိုတာ …တကယ်ရှိလားသိချင်မိသား..
ခင်ဇော် says: နာ ဆို ခုထိ
စိတ်တွက်လည်းး မချက်ချာ ဘူးးရယ်.. ဒီ တသက် ကုန်သည် မဖြစ်တော့ဘူး ထင်ရဲ့..
Tawwin Pan says: ဟုတ်ပ! အတွက်အချက်ကတော့ ညံ့သလားမမေးနဲ့…
ဦးဦးပါလေရာ says: တို့ဆေးဆိုတာ တကယ်မရှိလောက်ဘူးလို့ အရင်က ထင်ထားမိတယ်..
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: တားကို သင်ဘေး. တားကိုသင်ဘေး
Yae Myae Tha Ninn says: ဘုရင့်နောင် ပွဲရုံနားမယ် ခံခဲ့ရဖူးတယ်… ဖဲသုံးချပ်ပါ… စ ကတော့ စပ်စုတာပေါ့… အဲမှာ လာညီလေး အကို ပြမယ်ဆိုတော့ .. နိုး ပိုက်ဆံမရှိဘူး… မလိုဘူးလာကြည့်ဆိုပြီး ကြည့်လိုက်တာ… လက်က လက်စွပ်ပါသွားတယ်… ဟီး… အဲနားရောက်တော့ သူတို့ပြောသမျှ လုပ်ပေးနေရသလိုပဲ… အသိစိတ်တော့ ရှိတယ်… ဒါပေမဲ့ ငြင်းမရဘူး… ဟွင်းဟွင်း .. ဘယ်ရမလဲ နောက်မှ လူစုပြီး ပြန်သွားရိုက်ပြိုက်တာပေါ့… တန်ပါတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 115
Tawwin Pan says: အမျိုးတစ်ယောက်ဆိုလည်း ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေရောင်းဖို့အတွက် လာပြသလိုလိုနဲ့ လက်ဝတ်လက်စားတွေပါသွားဖူးတယ် ကြားတယ်…….
Ma Ma says: တို့ဆေးတော့ မကြုံဖူးလို့ မရှိဘူးလို့ပဲ ထင်တယ်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမှာ လက်လှည့်သွားတာလည်း ကြုံဖူးတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 154
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: စိတ်ညှို့လတ်တာနေမှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: အားနာတတ်သူကိုလိမ်ဖို့အလွယ်ဆုံး
Thint Aye Yeik says: ဘားလမ်းမှာ ဒေါ်လာတွေနဲ့ ဗမာငွေကို လဲနေကြသူတွေရဲ့ လိမ်ကွက်တစ်ခု ကိုယ်တိုင်မြင်ဖူးတယ်။ အဲ့တုန်းက ဒေါ်လာ ငါးဆယ် ရောင်းတာ…
သူ့လက်ထဲမှာ ခေါက် ယူထားလိုက်တာ..။ လှစ်ခနဲပဲ… မြန်ချက်…။ ကျနော်ကလည်း..သူတို့ပုံစံတွေက မရိုးသားဘူးလို့ ထင်ထားတာမို့ သေချာ အာရုံစိုက်ပြီးယူတော့…အဲ့လို ခေါက်ယူထားတကို မြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်ပြီး…
အဲ့ဒီ အောက်က ခေါက်ထားတဲ့ပိုက်ဆံက..ဘာလုပ်တာလဲဆိုပြီး ပိတ်အော်လိုက်တယ်။ .င်္ပြီးတော့… ခင်ဗျားဆီမှာ မရောင်းတော့ဘူးဆိုပြီး… ကိုယ့်ဒေါ်လာ ကိုယ်ဆွဲယူပြီး.. သူ့ဗမာငွေတွေ ပြန်ထိုးထည့်ပေးလိုက်တယ်။ တစ်နပ်စားဥာဏ်နဲ့ လုပ် စား ကြသူတွေမို့…
uncle gyi says: ကျွန်တော်တို့ဆီကကလေးတွေလဲ
Tawwin Pan says: ကိုယ်ကစေတနာနဲ့အကြွေလဲပေးရသေး….ပြီးတော့ ကိုယ့်ငွေလည်းပါသေး……….